Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa and his South African counterpart Cyril Ramaphosa arrive for bilateral talks in Harare. Picture: Reuters/Philimon Bulawayo
By MacDonald Dzirutwe Mar 12, 2019
Harare - President Cyril Ramaphosa said on Tuesday South Africa was ready to help Zimbabwe revive its economy, but within its means, while the two neighbours consider options that could see Harare receiving some financial assistance.
But in a joint communique issued after a meeting between Rampahosa and Zimbabwe's president Emmerson Mnangagwa and officials, the two countries said they were looking at increasing a standing credit facility between central banks of the two nations.
Under the facility, Zimbabwe can access 100 million rand from South Africa's central bank.
"Other financing options beyond this are also being explored, for example, a facility from South African private banks to the Zimbabwean private sector and guaranteed by the South African government with an appropriate counter-guarantee from the Zimbabwean government," the communique read.
"South Africa, Mr President, stands ready to render support to Zimbabwe within our means in your quest for economic renewal," Ramaphosa said, without giving details on whether this would entail financial help.
"We want to see meaningful support being given by international development partners to Zimbabwe because Zimbabwe does deserve the support that the world can give."
South Africa is Zimbabwe's largest trading partner and home to millions of Zimbabweans who flocked to the country amid an economic meltdown during Mugabe's rule.